नेपाल र बंगलादेशबिचको खेल कसरी हेर्ने लाईभ ? जानीराखौं - MeroKhelkud
नेपाल र बंगलादेशबिचको खेल कसरी हेर्ने लाईभ ? जानीराखौं
२०७८ आश्विन २७ गते २०७८ आश्विन २७ गते मेरो खेलकुद रिपोर्टर397LeaveaComment on नेपाल र बंगलादेशबिचको खेल कसरी हेर्ने लाईभ ? जानीराखौं
काठमाडौँ । माल्दिभ्समा जारी साफ च्याम्पियनसिप फुटबल अन्तर्गत लिग चरणको अन्तिम खेलमा आज नेपालले बंगलादेशसँग खेल्दैछ । नेपाल र बंगलादेशबीचको खेल मालेस्थित राष्ट्रिय रंगशालामा दिउँसो ४ः ४५ बजे सुरु हुनेछ ।
राउण्ड रोबिन लिगको आधारमा जारी प्रतियोगिताको शीर्ष दुई टोलीले फाइनलमा स्थान बनाउने छन् । यस्तोमा नेपाल ३ खेलमा ६ अंक जोडेर शीर्ष स्थानमा रहेको छ । अब नेपाललाई फाइनल पुग्न मात्र एक अंकको आवश्यकता रहेको छ ।
नेपालले सुरुआती दुई खेलमा लगातार जित निकालेको थियो । माल्दिभ्सलाई १–० ले हराएको नेपालले श्रीलंकालाई ३९२ ले हराएको थियो । तर, नेपाल आइतबार भारतसँग १–० ले पराजित भएको थियो ।
नेपाल बंगलादेशलाई हराउने योजनासहित मैदान उत्रनेछ । बंगलादेश पनि नेपाललाई हराएर फाइनल पुग्न चाहन्छ । बंगलादेश ३ खेलमा ४ अंक जोडेर चौंथो स्थानमा रहेको छ । दुवै टोलीका लागि डु अर डाइको अवस्था छ ।
यसरी हेर्नुस लाईभ
नेपाल र बंगलादेशबिचको आज हुने खेल नेपालमा एक्सन स्पोट्सले प्रतक्ष्य प्रसारण गर्नेछ । साथै बिश्वभरी रहनु भएको खेलप्रेमीहरुको लागि यो खेल सुरु हुने बित्तिकै हाम्रो वेबसाईटमा पनि लाईभ हेर्न सक्नु हुनेछ । त्यसैले कृपया यो खबरलाई शक्दो शेयर गरिदिनु होला ।
नेपाल भर्सेज बंगलादेश ! ‘हेड टु हेड’मा नेपाल कमजोर बंगलादेश बलियो
नेपाल पहिलोपटक साफ च्याम्पियनसिपको फाइनलमा
१२ वर्षपछि अप्रत्याशित रूपमा म्यानचेस्टर युनाइटेड फर्किए क्रिस्टियानो रोनाल्डो
२०७८ भाद्र ११ गते २०७८ भाद्र ११ गते मेरो खेलकुद रिपोर्टर
युरोकप फुटबल : आजको तेस्रो खेलमा १२ः४५ बजे इटाली र स्वीट्जरल्यान्ड भिड्दै, कसले जित्ला खेल ?
२०७८ असार २ गते २०७८ असार २ गते मेरो खेलकुद रिपोर्टर
लुका मोड्रिच थप एक वर्ष रियल मड्रिडमै
इन्डोनेसियाविरुद्ध नेपाल २–० ले पराजित
२०७८ कार्तिक ५ गते मेरो खेलकुद रिपोर्टर 0
विकास मेराग्लिया : इटाली देखि नेपालको ‘ए’ डिभिजनसम्म
नेपाल र इन्डोनेसिया बिच आज हुने खेल टिभीमा लाईभ हेर्न नपाईने
२०७८ कार्तिक ५ गते २०७८ कार्तिक ५ गते मेरो खेलकुद रिपोर्टर 0
यस्तो छ इन्डोनेसियालाई हराउँने नेपालको तयारी ( फोटो फिचर )